Ibsa Ejjannoo ADO Ajjeechaa Ilmaan Oromoo irratti Raawwatamaa Jiru Ilaalchisee! : Oromo Democratic Front
Posted by ODF on Friday, December 18, 2015 · Leave a Comment
Torbaan afuran dabran keessa mootummaa EPRDF fi ummata Oromoo giddutti walitti bu’iinsi hamaan godhamaa jira. Sababaan sochii Oromootaa kunis Karooraa Guddicha magaalaa Finfinneetii fi magaalota ollaa isiitti argaman walitti qindeessuuf (Masterplan) jedhu labsuu hundee taasifate. Karoorri jedhame kunis magaalaa Finfinnee badhisuuf jecha qonnaan bulaa Oromoo lafa isaa irraa buqqisuuf kan akeekkate tawuun hubatame. Yaaddoo kanarraa ka’uun barattootaa fi ummanni baldhaan Oromoo biyya guutuu keessatti hiriira nagayaa godhuu jalqaban. Mormiin Oromoon karaa nagayaatiin godhaa jiru kunis hariiroo xaxaa seenaa dheeraatii fi bara as aanaa kanas hamaataa deeme kan Saba Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru agarsiisa. Sochiin kun dhugaan muldhise yoo jiraate hundee cimoomaa eenyummaa qonnaan bulaa fi mirga inni qabeenyaa isaa irratti qabu garuu kan maqaa misoominaatiin mootummaan abbaa-irree mulquuf aggaammate irra deebi’ee mirkaneesse.
Tarkaanfiin mootummaan biyya bitaa jiru barattoota Oromoo karaa nagayaatin mirga isaanii gaafatanii fi falmataa jiran irratti raawwataa jiru heddu nu gaddisiisee jira. Barattoonni lakkoofsi isaanii danuu ajjeefaman kanneen kanarraa hafan dhibbootaan hidhamanii jiru. Tarkaanfii fokkataa fi gara-jabeessa barattootaa fi ummata nagayaa irratti fudhatamaa jiru kana haddeeffannee balaaleffanna!
Addi Demokraatawaa Oromoo (ADOn) sababiilee gurguddoo armaa gadii hundee taasifachuun Karoora Qindoomina Magaalaa Finfinnee fi Magaalota naannoo isitti argaman maqaa jedhuun waamamu jabeessinee dura dhaabbata:
Tokkoffaa, magaalaan muummittiin Itoophiyaa hanga ardhaatti jijjiirraa biyyatti keessatti gara Federeshina Sab-daneessatti godhamaa jiru calaqisiisuun hafee ammallee suuraa saba tokkichaa afaan Amaaraa dubbatu muldhifti. Mudaan kun mirga sabaa-sabootin magaalaa tana keessa jiraatan jireenyaa isaanii muldhisuuf qaban kanneen akka waltajjii aadaa tolfachuu, maqoota karaa maqaa isaanitiin moggaafachuu, afaan ofiitiin barachuu, soodduu dhaabbachuu, kkf kabajuudhaan sirrachuu qaba jenna. Sab-danessummaa heera sirna federaalaa keessatti tumame hujii irra oolchuun akka dandayamu tarkaanfiileen barbaachisoon fudhatamuun fi immaammanni qajeelaan tolfamee hujii irra ooluu qaba. Osoo hanga hardhaatti magaalaan muummittiin bifuma duraan qabdu kan afaan, aadaa fi eennyummaa saba tokkichaa itti fuftee jirtu gogaa isii dhisanii baldhisuun murnoota federashina sab-daneessa dura dhaabbatan jabeessuu ta’a. Kanaafuu humnoonni federashina sab-daneessa irraa dantaa qaban hundumtuu hujitti hiikamuu Mastarplan jedhumuu kana dura dhaabbachuu qaban!
Lammafaa, yoo ija heera biyyichaatiin laalamu Masterplaan baanan kun seera qabeessaa miti. Mirga keeyyata 49 keessatti tuqame hujii irraa oolchuu seera dandeessisuu tarreessanii hujii irra oolchuu duratti master plan kana dirqiin raawwachiisuuf dhiibuun mirga heeraan keenname mulqa. Akkuma keeyyata 49 jalatti tuqame dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu seeraa ifaan beekamee hujii irra ooluu qaba. Garuu Masterplaan jedhumu kun bu’ura hafuura heeraa cabsuu bira dabree faallaa kanaatiin dantaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu hambisee dantaa Finfinneen Oromiyaa irraa qabduun bakka buusa.
Sadaffaa, Ija seenaatiin yoo laalame magaalaan muummittiin madaa bara weerara alagaan Oromoo irratti geggeesse humnaan cabsee qabate fayyisuuf tattaaffiin hin godhamne. Akka seenaan ragaa bahuttii Magaalaan Finfinneetii fi magaalaalee Oromiyaa birollee dabalatee ummata Oromoo lafa isaa irraa humnaan buqqisuun ijaaramte. Kana jechuun magaalotiin Oromiyaa qubsummaa waraana weerartuu irraa gara magaalaatti guddatan. Daannooleen siyaasaa waraana humna weeratuu alagaa ummata magaalota Oromiyaa keessa qabatus hundeen jijjiiruu isaa hubachuun gamnummaadha. Kana jechuun ummata Oromoo lafa isaa irraa buqqisee alagaa dhaalchise. Kanaafuu Masterplaanichi roorroo fi yakka seenaa keessatti ummata Oromootii fi Oromiyaa irratti raawwatame raggaasisa.
Afuraffaa, MP kana ummata dhimmi ilaalu osoo hin mariyachiisin gubbaa irraa ummatatti fe’uuf yaaluun sirna bulchiisa gaarii fi demokiraatwaa hundeen faallessa. Adeemsaa fi tarkaanfiin abba-humnaa kun itti-gaafatummaa fi didhaa sirna Federaalawaa haqaa keessatti eeggamuu qabu bu’uraan faallessa.
Dimshaashumati, Magaalota guddisuu fi waarshaalee babaldhisuun magaalaa muummitti qofaa keessatti naannigamee(tuulamee) hafuu hin qabu. Magaalotni hundumtuu hiree guddinaa walqixa argachuu qaban. Guddinaa fi carraan baldhachuu walqixa raabsamuu irraa eeggama.
Addi Demokiraatwaa Oromoo (ADOn) tarkaanfiilee armaa gadii akka fudhatee hujii oolchu muutummaa Federaalaa gaafata:
1. Master plan fedhaa fi dantaa ummata Oromoo hin tarkaanfachiifne haqee hafuu isaa ifatti labsuu qaba
2. Ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti deemsisaa jiru haal-duree tokko malee dhaabee, barattoota Oromootii fi ilmaan Oromoo kan akka maletti ajjeefaman qaama qoratee (Komiishina qorannoo) namoota yakka kana hojjatanis seeraa fi murtiif akka dhiyeessu
3. Barattootaa fi namoota Oromoo kanneen hidhaman akka daddaffiin hiiku. Kanarrattis dabalee hidhamtoota siyaasaa hundumaa akka hiiku.
4. Tarkaanfii Itoophiyaan akka biyya sabaa fi sabootaatti calaqqisiisuu fudhachuu qaba: daandiilee maqaa sabaa fi sabootaatiin moggaasuu, walajjiilee aadaa sabootaa muldhisan tolchuu, kkf..
5. Daangaa magaalaa muummicha daangaa yaroo mootummaan jijjiirame jiru, 1991 kabajamee sararamuu qaba
6. Naannoon magaalaa hagafootaa (Metropolitan area) tolfamee bulchiisaa fi tajaajilli magaalota naannootii fi magaalaa muummitti qindeessu tolfamuu qaba
7. Mootummichi namoonni biroo heera akka kabajan gaafachuu isaatiin duratti heera ofumaa tumee labse adda durummaan kabajuun dirqama isaa tawuu hubatee kabajuu qaba.
8. Seeronni biroo kanneen heera biyyichaa faallessan hundumtuu haqamuu qaban
Ibsa Ejjannoo ADO Ajjeechaa Ilmaan Oromoo Irraati Raawwatamaa jiru